Chirevo chaBharami chekutanga (1-12)
Chirevo chaBharami chechipiri (13-30)
23 Bharami akabva ati kuna Bharaki: “Vaka atari nomwe panzvimbo iyi,+ uye ndigadzirire mikono minomwe yemombe nemakondohwe manomwe.” 2 Bharaki akabva angoita zvakanga zvataurwa naBharami. Uye Bharaki naBharami vakabayira mukono mumwe chete wemombe negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.+ 3 Bharami akabva ati kuna Bharaki: “Sara pano, pedyo nechibayiro chako chinopiswa, ini ndiende. Zvimwe Jehovha achataura neni. Chero zvaanenge andiratidza, ndichakuudza.” Saka akaenda kuchikomo chakanga chisina chinhu. 4 Mwari akabva ataura naBharami,+ uyo akabva ati kwaari: “Ndagadzira atari nomwe mumitsara, ndikabayira mukono mumwe chete wemombe negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.” 5 Jehovha akaisa shoko iri mumuromo maBharami:+ “Dzokera kuna Bharaki, uye izvi ndizvo zvaunofanira kutaura.” 6 Saka akadzokera uye akaona kuti Bharaki nemachinda ese eMoabhi vakanga vakamira pedyo nechibayiro chake chinopiswa. 7 Akabva ataura chirevo ichi achiti:+ “Bharaki mambo weMoabhi akanditora kubva kuAramu,+Kubva kumakomo ekumabvazuva: ‘Uya unditukire Jakobho. Chokwadi, uya utsoropodze Israeri.’+ 8 Ndingatuka sei vaya vasina kutukwa naMwari? Uye ndingatsoropodza sei vaya vasina kutsoropodzwa naJehovha?+ 9 Ndinovaona ndiri pamusoro pematombo,Uye ndinovaona ndiri pazvikomo. Serudzi, vanogara ikoko vari vega;+Havazviverengere pakati pemamwe marudzi.+ 10 Ndiani anogona kuverenga guruva raJakobho+Kana kuverenga kunyange chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvaIsraeri? Regai ndife zvangu* sekufa kunoita vakarurama,Uye kuguma kwangu ngakufanane nekwavo.” 11 Bharaki akabva ati kuna Bharami: “Chii ichi chawandiitira? Ndakakutora kuti utuke vavengi vangu, asi watovakomborera zvako.”+ 12 Akapindura kuti: “Ndorega here kutaura zvinenge zvaiswa mumuromo mangu naJehovha?”+ 13 Bharaki akati kwaari: “Uya tiende kune imwe nzvimbo paunogona kuvaona uri. Uchangoona vamwe vacho; hauzovaoni vese. Unditukire vanhu ivavo uri ipapo.”+ 14 Saka akaenda naye kusango reZofimu, pamusoro pePisga,+ akavaka atari nomwe uye akabayira mukono mumwe chete wemombe negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.+ 15 Saka Bharami akati kuna Bharaki: “Sara pano, pedyo nechibayiro chako chinopiswa, pandiri kumbonotaura naye ndiri uko.” 16 Uye Jehovha akataura naBharami, akaisa shoko iri mumuromo make:+ “Dzokera kuna Bharaki, uye izvi ndizvo zvaunofanira kutaura.” 17 Saka akasvika kwaaiva, akaona kuti akanga akamumirira ari pedyo nechibayiro chake chinopiswa, uye aiva nemachinda eMoabhi. Bharaki akamubvunza kuti: “Jehovha ati chii?” 18 Akabva ataura chirevo ichi achiti:+ “Simuka, Bharaki, uteerere. Ndinzwe, haiwa iwe mwanakomana waZipori. 19 Mwari haasi munhuwo zvake anotaura nhema,+Uye haana kufanana nemwanakomana wemunhu anochinja pfungwa.*+ Kana akataura chimwe chinhu, angarega kuchiita here? Kana akataura, anotadza kuzvizadzisa here?+ 20 Ona! Ndakatorwa kuti ndikomborere;Iye zvino akomborera,+ uye handigoni kuzvichinja.+ 21 Haadi kuona Jakobho achiitirwa zveuroyi,Uye haaregi Israeri achisangana nematambudziko. Jehovha Mwari wake anavo,+Uye anorumbidzwa chaizvo samambo pakati pavo. 22 Mwari ari kuvabudisa muIjipiti.+ Akaita senyanga dzenzombe yemusango kwavari.+ 23 Nekuti Jakobho haazoshurudzirwi,+Uye hakuna kana kushopera kungaitirwa kukuvadza Israeri.+ Panguva ino zvinogona kunzi nezvaJakobho naIsraeri: ‘Onai zvaitwa naMwari!’ 24 Rudzi urwu ruchasimuka seshumba,Uye ruchasimuka rwega seshumba.+ Haisi kuzorara pasi kusvikira yadya mhuka yayabataUye yanwa ropa remhuka dzayauraya.” 25 Bharaki akabva ati kuna Bharami: “Kana usingagoni kumutuka, saka chiregawo kumukomborera.” 26 Bharami akapindura Bharaki achiti: “Handina kukuudza here kuti, ‘Ndichaita zvese zvinenge zvataurwa naJehovha’?”+ 27 Bharaki akati kuna Bharami: “Ndapota, uya ndikuendese kune imwezve nzvimbo. Zvimwe zvichange zvakarurama kuna Mwari wechokwadi kuti unditukire Israeri uri ipapo.”+ 28 Saka Bharaki akaenda naBharami pamusoro pePeori, pakatarisana neJeshimoni.*+ 29 Bharami akabva ati kuna Bharaki: “Vaka atari nomwe panzvimbo iyi, uye ndigadzirire mikono minomwe yemombe nemakondohwe manomwe.”+ 30 Saka Bharaki akaita zvakanga zvataurwa naBharami, uye akabayira mukono mumwe chete wemombe negondohwe rimwe chete paatari imwe neimwe.
^ Kana kuti “Regai mweya wangu ufe.”
^ Kana kuti “anozvidemba.”